बहस शब्दकोशको : राजनीति वा जननीति ?| Nepal Pati
बहस शब्दकोशको : राजनीति वा जननीति ?
आदिम साम्वयादी युगको पतन र सामान्तवादी युगको उदय भए पश्चात विश्वको इतिहासको धेरै जसो कालखण्ड राजतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा आधारित भयो । अर्थात राजा (सबै क्षेत्रमा पहूँच भएका उच्च खानदानिया) ले वंशिया शासनको शुरुवात गरे । दास र दास मालिकाको उदय देखी नै यसको प्रारुप देखा परेको हो ।
अतः राजाहरुले शासन गर्ने पद्धतिको शुरु भएदेखी अंग्रजी भाषामा भनिने Poltical लाई नेपाली भाषामा‘राजनीति’ भनि परिभाषित गरिएको हुनु पर्दछ । यो शब्दको अर्थ आफैमा ब्यापक छ । भन्नुको तात्पर्य राजाले नीति लागु गरी त्यो भूगोलका जनतालाई रैती(आफ्ना कमारा, कमारी) बनाउने र आफुहरु राज सिंहासनमा बसेर हुकुम चलाउने ब्यवस्थाको शब्दकोष नै ‘राजनीति’ भएको हुनु पर्दछ ।
सारमा राजा रजौटा, भाई भारदारियाहरुले हुकुम प्रमाणिकरण गरेर चलाउने नीतिलाई नै ‘राजनीति’ भनिदै आएको छ र अहिले पनि हामीहरुले यहि शब्दलाई आफ्नो सम्पत्तीका रुपमा उजागर गरिरहेका छौं । अंग्रजी भाषाको Poltical बाट नेपाली भाषाको आख्यानमा झाँगिएको यो शब्दको यति नै चर्चा गरे पुग्ला सायद ।
राजतन्त्र(राजनीति) हटाउन विश्वमा भएका केही क्रान्तिहरुः
अर्थात राजनीतिलाई हटाएर जननीतिमा बदल्न विश्वमा केही महत्वपूर्ण क्रान्तिहरु भए । इस्वि संवत १७८९ मा फ्रान्समा सामान्ती राजतन्त्रका विरुद राज्य क्रान्ति भयो । जुन क्रान्तिले समानता, स्वतन्त्रता र भाईचाराको नारा दियो । राज्य क्रान्ति हुनुको मूख्य कारण सामान्ती राजतन्त्र नै थियो । लुई चौधौंले‘ म नै राज्य हुँ, मेरा शब्दहरु नै कानुन हुन’ भनि आफुलाई परिभाषित गरे । जसका कारणले सामान्ती ब्यवस्थाका विरुदमा जनताले क्रान्ति गरे ।
यसै गरी अमेरिकामा व्रिटिस औपनिवेशले पनि एक प्रकारको सामान्ती ब्यवस्थामा आधारित शासन संचालन गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध जर्ज वाशिगटनको नेतृत्वमा जनताले चलाएको लामो संघर्षबाट इ.स. १७८३ मा आजदीको लडाँई समाप्त भयो । इ.स. १७७६ जुलाई ४ मा पूर्ण स्वतन्त्रता मिल्यो । त्यो आन्दोलनको मूल मर्म प्रतिनिधित्व हुँदैन भने कर पनि तिरिदैन भन्ने थियो ।
इटली एकीकरणको कालखण्ड पनि यस्तै थियो । १९ औं शताब्दि पूर्व इटलीमा १३ राज्यहरु थिए । ती १३ वटा भुरे टाकुरे राजतन्त्तात्मक देशहरुलाई एकीकरण गरी प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि जोसेफ मेजिनीको नेतृत्वमा इ.स. १८३१ मा विजय प्राप्त गरी ‘जवान इटली’ नामाकरण दिदै प्रजातान्त्रिक अभ्यास शुरु गरियो । इ.स.२ अप्रेल १८६० बाट इटली देशको जन्म भएको मान्न थालियो । इटली एकताका जन्मदाता नेपोलियन थिए ।
रुसमा सामान्तवादी जार शासनले लामो समय शासन गरिरहेको थियो । जसका विरुद्ध वोल्सेविक पार्टीका नेता लेनिनको नेतृत्वमा जनताले वलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे । इ.स. १९१७ मा जारशाही शासनको अन्त्य भयो र समाजवाद लागु भयो ।
चिनमा पनि मंचु राजवंशको पतन इ.स. १९११ मा भयो । इ.स. १९११ डिसेम्बर २९ का दिन क्रान्तिकारीहरुले सनयात सेनलाई आफ्नो सरकारको अध्यक्ष चुने । त्यस पछि इ.स. १९२५ मा माओले हुननमा किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरे । इ.स. १९४९ अक्टुबर १ तारिकामा माओको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भयो र सामान्ती राज्यब्यवस्था सधाका लागि अन्त्य भयो । यसरी विश्वमा सामान्ती शासनको अन्त्यको लहर आएको हो ।
अर्थात ‘राजनीति’ शब्दको अन्त्य भएको हो । यो विश्वमा सामान्ती राज्यब्यवस्थाको अन्त्यका केही उदाहरण मात्र हुन । अर्थात राजनीति हटाउन भएका संघर्षहरु हुन ।
राजतन्त्र(राजनीति) हटाउन नेपालमा भएका केही क्रान्तिहरुः
यस विषयमा हामी सबै नेपालीहरु जानकार नै छौं । विषयलाई धेरै लमो बनाउन नपर्ला । मूलत चार जना शहिदहरुले राजतन्त्र(राजनीति) हटाउनका लागि जीवन वलिदान दिए पश्चात यसको शुरुवाद भएको हो । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र, २०४६ सालमा प्राप्त वहुदलिय ब्यवस्था, २०५२ मा शुरु भई २०६१ तिर समाप्त भएको शसस्त्र संघर्ष, २०६३ मा प्राप्त जणतन्त्र राजतन्त्र(राजनीति) हटाउन गरिएका आन्दोलनहरु हुन ।
मुख्य गरी विगतमा पटक पटक राजतन्त्र(राजनीति) हटाउन आन्दोन भए तर ती आन्दोनहरु पछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सकेन । २०६३ सालमा प्राप्त जनशासन पश्चात नै राजतन्त्र(राजनीति) को अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । लगभग अब नेपालमा राजतन्त्र(राजनीति) फर्कन सक्ने संभावना हटेर गएको छ । २०६३ पश्चात नेपाल अर्को युगमा प्रवेश गरेको छ । यद्धपी यसभित्र पनि त्यही परम्परावादी चिन्तन, सोच र कार्यशैली रहेकाछन ।
विषयको मूख्य अन्तर्रवस्तु नेपाली शब्दकोषमा रहेको र हामी सबैले सत्ता प्राप्ती गर्ने क्रियाकलापको नाम राजनीतिसित सम्बन्धित रहेको छ । यस विषयमा माथि केही कुराको चर्चा भईसकेको छ । यो राजनीति भन्ने शब्द नै अबको सन्दर्भमा खोटपूर्ण हुन्छ की ? या त यो शब्दले प्रतिगामी दिशाबोध गर्छ की ? भन्ने शब्दको समस्या देखा परेको छ । जसरी नेपालमा राजतन्त्र ढल्यो, राणा शासन ढल्यो, ससस्त्र युद्ध ढल्यो ठीक त्यही प्रकारले अब नेपाली शब्दकोषमा रहेको राजनीति शब्द पनि ढाल्नु पर्दछ की ? किनभने राजाले शासन गर्ने नीतिलाई नै मूख्य आधार मानेर राजनीति शब्दको उत्पत्ती भएको हो । यो शब्द नेपालमा सामान्ती राजतन्त्र हुँदासम्म ठीक थियो तर अहिले नेपालमा सामान्ती राजतन्त्र छैन । अहिले नेपालमा जनतन्त्र छ अर्थात जनताको शासन छ । जनताको शासन छ भन्नुको अर्थ जननीति छ । यस कारण ‘राजनीति’ शब्दलाई हटाएर जननीति शब्द लेखिनु पर्दछ र बोलिनु पर्दछ ।
वास्तमा परिर्वतनको पहिलो अनुभूती त्यसपूर्व त्यस शासनसंग सम्बन्धित शब्दहरु पनि अन्त्य हुनु पर्दछ । हामीले प्राप्त जनतन्त्र गर्ने तर भन्ने बेलामा त्यही पुरानो शासनका लागि उत्पत्ती गरिएको शब्द प्रयोग गर्ने । शब्दले कतै त्यही पुरानो शासन त छैन भन्ने शंका उत्पन्न गर्दछ ।
हुन त शब्दले होइन, सत्ता ब्यहारमा बदलिनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सत्ता संचालनको विधि, प्रकृया, पद्धती त्यही सामान्ती राजतन्त्रको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेको छैन । देश नीति र विधिबाट संचालित छैन । जनप्रतिनिधिहरु भ्रमणमा जाँदा पहिलाको सामान्ती संस्कार अनुसार स्वागत गर्ने, अघि पछि लाग्ने, भोजभण्डारा गर्ने, राजसी खाना खाने, सम्मान पनि त्यही सामान्ती पाराको शैलीमा गर्ने प्रचलन छँदैछ ।
सत्ताले अन्य दैनिक सम्पादन गर्ने कार्यशैली पनि हुवहु सामान्ती पारा र संस्कार अनुसार नै छ । तथापी राजनीति शब्दको अहिले पनि उही औचित्य छ जस्तो लाग्दछ ।
अन्त्यमा यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान युगको सन्दर्भमा राजतन्त्र(राजनीति) भन्ने शब्दको सट्टामा जननीति शब्द हामी सबैले प्रयोग गर्नु पर्दछ की ? जस्तै तपाँई के गर्नु हुन्छ ? राजनीति भन्नुको सट्टा तपाँई के गर्नुहुन्छ ? जननीति गर्छु भन्न शुरु गर्ने हो की ?, नेपालका राजनीति पार्टीहरुको सट्टामा नेपालका जननीति पार्टीहरु भन्न शुरु गर्ने हो की ? अर्थात सारमा हामीले जुन जुन ठाउँमा राजनीति शब्द प्रयोग गर्दै आईरहेका छौं, ती ती ठाउँहरुमा जननीति शब्द प्रयोग गर्दा वास्तमा अब नेपालमा जनताको शासन शुरु भयो भन्ने पहिलो सकारात्मक सन्देश जाने थियो । यो अपरिहार्य पनि रहेको छ ।
लेखक दैलेख उद्योग वाणिज्य संघ, दैलेखका कार्यवहाक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।